>အိမ် | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: သီချင်း — 18 Comments	December 6, 2009
အိမ် – ဓီရာမိုရ်
♬ ကမ္ဘာမြေမှာ ခိုလှုံရာ ခေါ်ဆိုတဲ့ အိမ်ရံရွေတော် ထပ်ဝါစွာ ဆင်စွယ်နန်းအိမ်ကျူထရံတွေ ကာရံကာ ဓနိမိုးအိမ်နှလုံးသားတွေ နွေးထွေးရင် ဒါဟာလည်းအိမ်
♬ အိမ်တစ်အိမ်မှာ မှီတည်ရာ ဘာသာတရားတွေကမ္ဘာမြေမှာ ဖြူစင်စွာ အကြင်နာများဝေ….ပိုင်ဆိုင်ရာ တွယ်တာရာ ဒီရင်သွေးတွေဆည်းလည်းသံ လှိုက်ခတ်စေ ဒီချစ်ခြင်းတွေ…
♪♫♪ ကလေးလေးတွေ နွေးထွေးဖို့ လေကမ္ဘာမြေမှာ အိမ်တစ်အိမ်တည်ဆောက်ကြမယ်လေ…♪♫♪ မြင့်မြတ်ခြင်းတွေ ငြိမ်းအေးခြင်းတွေကမ္ဘာမြေမှာ ညင်သာစွာ စီးဆင်းဖို့ လေ…♬ အိမ်အပြင်မှာ ဝါပင်တွေ ကိုယ်တိုင်စိုက်မယ်ကိုယ်တိုင်ငင် ဝါချည်မျှင် ဖျင်တဘက်ရယ်..အိမ်အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်ထွန် ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့စပါးရိတ်ချိန် ၀ိုင်းဖွဲ့ မယ် ဆန်အရက်ရယ်…
♬ ဒီအချိန်ဆို အိမ်အပြင်မှာ ကဗျာတွေ ရွတ်မယ်လာပါကွယ် အိမ်အပြင်မှာ ဂစ်တာတီးမယ်ရင်ခွင်မှာ ကြင်နာသူချိုအနမ်းရယ်ချစ်မိတ်ဆွေ စည်းချက်ညီ အတူတူကမယ်
♪♫♪ ကလေးလေးတွေ နွေးထွေးဖို့ လေကမ္ဘာမြေမှာ အိမ်တစ်အိမ် ဆောက်ကြမယ်လေ…♪♫♪ မြင့်မြတ်ခြင်းတွေ ငြိမ်းအေးခြင်းတွေကမ္ဘာမြေမှာ ညင်သာစွာ စီးဆင်းဖို့ လေ….
♫ ရင်ခွင်မှာ ရှင်သန်ရာ မှီခိုရာ အိမ်တစ်အိမ်ကိုကမ္ဘာမြေမှာ တည်ဆောက်ကြမယ်…အဆောင်အယောင်တွေ မဆင်ရင်စေ ရင်ခွင်အိမ်ပျော်ရွှင်ပါစေဒဏ္ဏာရီရာဇ၀င်လို ၀ိညာဉ်အိမ် စိန်စီရာ ရတနာခြယ် သိင်္ဂါရီအိမ်…..
♫ တစ္တေတစ်ကောင် ဟန်ဆောင်သလို မာယာကင်းမဲ့မနာလိုတဲ့ မစ္ဆရိယ ချည်နှောင်မှုမဲ့ကံစီရင် ယုံကြည်စွာ ကမ္ဘာမြေမှာတို့ အိမ် ငါတို့ အိမ်ရဲရင့်လိုက် ချစ်တဲ့ အိမ် တို့ ဆောက်ကြမယ်…
♪♫♪ ကလေးလေးတွေ နွေးထွေးဖို့ လေကမ္ဘာမြေမှာ အိမ်တစ်အိမ်ကိုဆောက်ကြမယ်လေ…♪♫♪ မြင့်မြတ်ခြင်းတွေ နွေးထွေးခြင်းတွေကမ္ဘာမြေမှာ ညင်သာစွာ စီးဆင်းဖို့ လေ…
………………. ♪♬♩♫ ……………….
ငါတို့အိမ် – ဓီရာမိုရ်တေးရေး – အရိုး
♫ အိမ်ခေါင်မိုးက မိုးမလုံလည်း … ငါတို့လုံးဝ စိတ်မကုန်ပါ …ရေခံခွက်အောက် မိုးစက်တပေါက်ပေါက် ကျသံဟာ … တွံတေးကြီး တေးသံလား …အမေဆင်မြန်းတဲ့ နန်းဆောင်အို ကိုရွှေသကြားမင်း ဗိမ္မာန်မို့ …စင်တင်ဇာတ်ထုတ်ထဲက အကောင်းစားတိုက်အိမ် … တစ်လုံးနဲ့ မလဲပါဗျို့ …ရွှေမြေအိုးမည်း နှုတ်ခမ်းရယ်တို … ဆာနေကြတဲ့ ၀မ်းတွေစို …အခုရထားတဲ့ လောကစည်းစိမ် … နတ်ပြည်နဲ့ မလဲဘူး …
♫ အမေ ကောက်ညှင်းဆန် လက်တစ်ဆုပ်ပေါင်း နှမ်းထောင်းရင် …နတ်ပေးတဲ့ သြသဓဆေး …အတိတ် အနာဂတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ …တို့ အိမ်က မခွဲကြေး …ပညာမတတ် ဉာဏ်နည်းတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေလို့ …ကောင်းချီးသြဘာပေး … စိတ်မဆင်းရဲဘူးဟေ့ တို့အိမ် …တစ်ခေါက်လောက် မင်းလာကြည့်တော့ … သူငယ်ချင်း …
♫ မဟာဂေါဏ ဘို့လည်ထောင် … စူဠဂေါဏ နောက်အငယ်ကောင် …အတူတစ်ကျင်းထဲစားတဲ့ တို့ရဲ့နွားနှစ်ကောင် … အမေ့ရဲ့ သားတော်မောင် …မဟာအန္ဓအစ်ကို့နာမည် … စူဠအန္ဓ ကျွန်တော့်နာမည် …အနှိမ်ခံ တောသားကျောမွဲ ဦးနှောက်နည်းလည်း … အမေ့ရဲ့ အားတွေပဲ …ညီမလေးက နှီးထိုင်ဖြာ … အဘက ဆေးတစ်ဆုံဖွာ …မှောင်ရီလရိပ်အောက်က တိတ်တဆိတ်ညတွေမှာ …အမေ့ရဲ့ တရားသံနာ …လူဟာဘယ်လောက်ထိ အသက်ရှင်လဲ …ဘယ်လောက်အများဆုံး ရနိုင်လဲ … အခုရထားတဲ့ လောကစည်းစိမ်တွေ …ဘယ်လောက် ကြာကြာ မြဲမလဲ …
♫ လူဟာ လောဘတရားနဲ့ ငရဲလမ်းသွားတဲ့ … ဒုက္ခယက်ကောင်များ …အတိတ် အနာဂတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ … တင်းတိမ်ရောင့်ရဲကြ …ပညာမတတ် ဉာဏ်နည်းတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေလို့ …နှာခေါင်းရှုံ့ လက်ခံမလား … စိတ်မဆင်းရဲဘူးဟေ့ တို့အိမ် …တစ်ခေါက်လောက် မင်းလာကြည့်တော့ သူငယ်ချင်း … ………………. ♪♬♩♫ ……………….
18 Comments: naychi
December 7, 2009 at 1:45 am	>ဒီသီချင်း အဖြူရောင်သံဇဉ်မှာ စနားထောင်ဖူးတာ…ကြိုက်တယ်… အိမ်ကိုလည်း လွမ်းတယ်။ နွေးနေခြည်
December 7, 2009 at 2:46 am	>စိတ်လျှော့ကိုချမ်းရ .. =)
December 7, 2009 at 3:21 am	>ဖတ်ပြီး အိမ်ကို သတိရသွားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က အိမ်က ဓနိမိုးအိမ်လေးပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ နယ်က အိမ်တွေအားလုံးလိုလို ဓနိမိုးတွေဖြစ်တယ်။
December 7, 2009 at 3:38 am	>ဒီသီချင်းလေးတွေ သိတယ်.. ကြိုက်တယ်…
December 7, 2009 at 4:49 am	>ကျေးဇူးအစ်ကိုရေအခုမှနားထောင်မှာလေ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေလားဗျ
December 7, 2009 at 5:36 am	>ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေ ပါဗျာ။
December 7, 2009 at 6:13 am	>ကိုချမ်းရေ…သီချင်းနှစ်ပုဒ်လုံး ကော်ပီကူးသွားတယ်ဗျာ…။ တုံးတယ်ပဲ ဆိုဆိုတစ်ခါမှ နားမထောင်ခဲ့ ဖူးဘူးဗျ…။ ဒါပေမယ့် စာသားလေးတွေ ကိုကြည့်ရတာရယ်… ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဆိုတာရယ်ကြောင့် သဘောကျသွားတာ…။ကျေးဇူး….ခင်မင်လျှက်…ဏီလင်းညို
December 7, 2009 at 7:28 am	>အကိုချမ်းရေ အိမ်ကို ပိုလွမ်းသွားမိတယ်
December 7, 2009 at 4:31 pm	>နွေးထွေးတဲ့အိမ်ကိုပြန်ချင်လှပါပြီ။ဘယ်တော့များမှပြန်နိုင်ပါ့မလဲ..
December 7, 2009 at 9:10 pm	>အဲ့ဒီ့အိမ်ထဲက သင်ဖြူးဖြာအေးအေးလေးတစ်ချပ်ပေါ် မှာမှေးစက်ရတာက အခုလိုမွှေ့ရာထက်က အိပ်ပျက်ညတွေထက်စာရင် ဇိမ်ရှိလိုက်ပါဘိ..ကိုချမ်းရေပျော်ပါစေ…
December 7, 2009 at 9:46 pm	>မြန်မာပြည်ပြန်ရပြီးအိမ်မပြန်ရလိုက်တဲ့သူမို့ပိုတောင် အိမ်ကိုလွမ်းသွားပြီ……
December 8, 2009 at 1:22 am	>သီချင်း ၂ပုဒ်လုံး နားမထောင်ဖူးဘူး နားထောင်ပြီး အိမ်ကို ပိုလွမ်းသွားတယ်
December 8, 2009 at 3:57 am	>အပေါ်က အိမ် သီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီးကတည်းက ကြိုက်နေခဲ့တာ … ခုလို စာသားတွေပါ ရှာထားပေးတော့ အဓိပ္ပါယ် တိတိကျကျ နားထောင်ရတာပေါ့ … ကျေးဇူး ..နော် ..ခင်မင်စွာဖြင့် လင်း
December 9, 2009 at 11:56 pm	>ကိုချမ်း မကောင်းဘူးဗျာ…အိမ်ကိုလွမ်းမိပြီ…သီချင်းလေးတွေကူးသွားမယ်…လွမ်းလို့ဗျ..
December 10, 2009 at 5:58 am	>thanks for lovely song.
December 11, 2009 at 5:54 am	>“အိမ်”ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားလိုက်တာနဲ့ ကျမတော့ မိသားစုမောင်နှမနဲ့ခုမှအတူပြန်နေဖြစ်လို့ အိမ်လွမ်းသူဘ၀နဲ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့နှစ်လတွေကိုတောင် ပြန်လွမ်းမိတယ်
December 13, 2009 at 2:05 pm	>ဒုတိယသီချင်ကိုပိုကြိုက်တယ် ကိုချမ်းရအဓိပ္ပာယ်အပြည့်ပဲ…းဝ)
December 16, 2009 at 3:19 am	>ပထမဆုံး အပုဒ်ကို ကြားတော့ ကြားဖူးနေတယ် ။ ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ် ။ ။း)
« >♎ Adjustment ♎
>နေဝင်ချိန် ဇရာအို၏စိတ်ကူး »